ရခိုင်ဘက်မှ မွတ်စလင်များ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက် ထွက်ပြေးနေ | ဧရာဝတီ
ရခိုင်ဘက်မှ မွတ်စလင်များ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက် ထွက်ပြေးနေ
ငြိမ်းချမ်း| January 21, 2013 | Hits:3,958
2 | | ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်း ပဋိပက္ခများကြောင့် ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ပြေးလာသူများ (ဓာတ်ပုံ-ငြိမ်းချမ်း/ဧရာဝတီ)
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပဋိပက္ခများ တည်ငြိမ်နေသော်လည်း မွတ်စလင်များ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်သို့ ဆက်လက် ထွက်ပြေး ရောက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ စစ်တကောင်းတိုင်း ကော့က်စ်ဘဇား ခရိုင် တာ့ခ်နာ မြို့နယ် ဆားဘိုဒင်(ရှင်းမဖြူ)ကျွန်းသို့ ဇန်န၀ါရီ ၁၈ ရက် က မွတ်စလင် ၅၉ ဦးပါဝင်သည့် စက်လှေ ၂ စီး ဦးတည်လာရာ ဖမ်းဆီး၍ မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်လိုက်သည်ဟု တာ့ခ်နာ အခြေစိုက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကမ်းခြေစောင့် တပ်က ပြောပြသည်။
“အစားအစာနဲ့ သောက်ရေတွေပေးပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ ကျနော်တို့ တပ်က စက်လှေတွေနဲ့ ကျနော်တို့ ရေပိုင်နက် ကုန်တဲ့ အထိ လိုက်တွန်းပို့ ပေးလိုက်ပါတယ်”ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကမ်းခြေစောင့်တပ် အရာတဦးရှိက ပြောသည်။
ယခု ပြန်ပို့လိုက်သည့် ၅၉ ဦးသည် မောင်တောမြို့နယ်ဘက်မှ ဖြစ်ပြီး ကလေး ၁၁ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၅ ဦးနှင့် အမျိုးသား ၃၃ ဦးပါဝင်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့သည် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးမှုနှင့် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲများကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက် ထွက်ပြေးခြင်း ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
တာ့ခ်နာ မြို့မှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ထောက်လှမ်းရေး တဦးက“ဒီဘက်ကို မြန်မာဘက်က မွတ်စလင်တွေက ပုံမှန်တော့ တရားမဝင် လမ်းကြောင်းတွေက လာနေကြတာပဲ။ အခု အခြေအနေက မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာ အေးချမ်းနေတဲ့ အခြေနေရှိနေပြီး ဘာလို့ပြေးကြ တာလဲ မသိဘူး”ဟု ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်၊ ဇူလိုင်နှင့် အောက်တိုဘာလ ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားချိန်ကစပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကမ်းခြေ စောင့် တပ်ဖွဲ့ကို အင်အားတိုးမြှင့်ချထား၍ ပင်လယ်ပြင် လုံခြုံရေးအတွက် မျက်ခြည်မပြတ် စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အနေဖြင့် လက်ရှိ လက်ခံထားသည့် ဒုက္ခသည် ၃၀၀၀၀ ကျော်ကို မြန်မာအစိုးရထံ တရားဝင်ပြန်လည် အပ်နှံနိုင်ရေး ကြိုးစားနေချိန်တွင် ဇွန်၊ ဇူလိုင် ပဋိပက္ခများကြောင့် ထွက်ပြေး ခိုလှုံလိုသူများကို လက်မခံဘဲ လာရင်း နိုင်ငံဆီသို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့ အရေးအခင်းက ကတည်းက ယနေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ဘင်္ဂလားဒေ့ ရှ် နိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ပြေးလာသူ ၄၀၀၀ ကျော်ကို မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သတင်းများတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဘင်္ဂါလီ (မွတ်စလင်) လူမျိုး၂ သိန်းခွဲရှိပြီး၂၀၁၂ ခုနှစ်၌ ၁၀ သိန်း ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း၊ မောင် တော ဒေသတွင် ဘင်္ဂါလီ ၉၄ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရခိုင် ၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိ၍ လက်ရှိ အခြေအနေတွင် လုံခြုံရေးနှင့် စားဝတ်နေရေး မူလ အခြေ အနေသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက ပြော ဆိုထားသည်။
ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ကျောက်နီမော် ဒေသမှ မသီတာထွေး အသတ်ခံရမှု နှင့်ဆက်စပ်၍ ၂၀၁၂ ခု ဇွန်လဆန်းမှ စတင်ခဲ့သော ရခိုင်ဒေသ တွင်း ပဋိပက္ခများကြောင့် သေဆုံးသူ ၈၀ ၀န်းကျင်၊ ဒဏ်ရာရသူ ၁၁၂ ဦး၊ လူနေအိမ် ၅၀၀၀ ၀န်းကျင်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၁၄ ကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း ၃ ကျောင်း၊ ဗလီ ၁၇ ခု ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီး ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး က ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက် နေ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောဆိုခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခု အောက်တိုဘာလ အတွင်းကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်၌ တကျော့ပြန် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူ ၁၀၀ ကျော် သေ ဆုံး ခဲ့သေးသည်။
ဘင်္ဂလားဘက်မှ ရခိုင်ရွာများ ကိုယ်တိုင် လုံခြုံရေး ယူနေရဆဲ
ရသေ့တောင်၌ သံဃာနှင့် ပြည်သူများ ဆန္ဒပြ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ မြန်မာသစ်များ မှောင်ခိုလမ်းကြောင်းမှ အလုံးအရင်း ဝင်
9 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Ngwe Soe January 21, 2013 - 2:12 pm	They are not fleeing into Bangladesh, they are returning to their homeland. They are Bengali and Bangladesh is their home country.
Reply	swe htwe January 21, 2013 - 6:01 pm	That’s right. Banglandesh is their mother country.
Reply	Gonsam January 21, 2013 - 7:08 pm	They have plan to go to malaysia,can be Thailand too from Shin Ma Phyu island.This way is much easier.Because,they heared refugee accept program from Thailand/UNHCR for them.I am not sure true or not.kalar kalar chin taung lat ma kan kya buu naw.We all have to watch them out,his is not only governmen duty.Ours.
Reply	AunG January 22, 2013 - 8:25 am	They are Bangalis , illegal immigrants from Bangladesh.
Reply	mr TM January 21, 2013 - 8:28 pm	ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေးနောက်ထပ်ဘယ်လောက်ကလိမ်ကကျစ်လုပ်အုံးမှာလဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လုံခြုံရေးနဲ့စားဝတ်နေရေးအားလုံးအဆင်ပြေနေပြီဆိုတာရခိုင်တွေအတွက်တော့မှန်တာပေါ့ ဒုက္ခသယ်စခန်းတွေမှာပိတ်လှောင်ထားပြီးဘယ်မှထွက်ပြီအလုပ်လုပ်လို့မရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေ ကတော့ငတ်ပြတ်နေပြီးကျမ္မာရေးအတွက်လဲဆေးဝါးမရှိနေ့စဉ်တယောက်ပြီတယောက်သေ နေတော့လုံခြုံတဲ့နေရာကိုထွက်ပြေးကြတာပေါ့သူတို့သာဘန်ဂါလီတွေဆိုရင်ဘင်းဂလား သေ့စ်ကလက်မခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး၊ဝန်ကြီးပြောသလို၁၉၈၀ ခုနှစ်မှာရိုဟင်ဂျာ၂သိန်းခွဲဘဲ ရှိတယ်ဆိုတာနေဝင်းလက်ထက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်တခုလုံးမှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအပြင်ဘင်း ဂလားသေ့စ်ဒုက္ခသယ်စခန်းတွေကနေပြန်ခေါ်လာခဲ့ရတဲ့ရိုဟင်ဂျာ၂သိန်းကျော်ရှိနေခဲ့တာဘဲ ယခုလက်ရှိ၁၀သိန်းဆိုတာကကောဘယ်စရင်းအင်းပြောနေတာလဲဝန်ကြီးတယောက်ရဲ့စကားဆိုတာတန်ဘိုးရှိအောင်ပြောတတ်ဘို့လိုပါတယ်၊မှတ်ချက်ရေးတဲ့သူတွေလဲဒါငါတို့နိုင်ငံ သူတို့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဆိုပြီမျက်စိစုံမှိတ်ပြီမရေးကြပါနဲ့ဟိုဘက်နိုင်ငံထဲမှာလဲငါတို့ရခိုင်တွေအ များကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာမမေ့သင့်ပါဘူး၊
Reply	Min Gao January 21, 2013 - 10:00 pm	To end hypocrisy over RO that most lobbyists do, in the first place using orchestrated use of words such as “ethnic-cleansing” should be reviewed. Most of them entered MM got illegal status which is the same happen-stance in other parts of the world and that is the fact they need to sail down south. Three big problem makers are keeping silent. The British who imported so called RO may feel that they are not relevant Cos’ it isacentury-old stuff. Some Myanmar officials who intentionally let RO landed in MM soil are now sitting over bribed money and still escape unscathed. The main breeder in the west is sealing their hearts and denying brotherhood.
Reply	kyaw January 21, 2013 - 10:34 pm	ALL MYANMAR MUST TO BE WELCOME THIS NEWS THAT RUBISH TURN BACK THEIR LAND BANGALARDISH…
Reply	မင်းကြီးညို January 22, 2013 - 4:45 am	ခိုးဝင်လာသူတွေပါ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရမှ လက်ခံသင့်တယ်။ သူတို့နိုင်ငံက ဆင်းရဲတော့
ကိုယ့်အမျိုးအနွယ်ကိုတောင် ကိုယ်မကြည်ဖြူတော့ဘူး။ တကယ့် မနှစ်မြို့စရာ နိုင်ငံပါ။
Reply	DK January 22, 2013 - 11:26 am	မွတ်စလင်ဆိုတာ လူမျိုးစုံသောအစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူများအားလုံးကိုဆိုလိုတာပါ။ မွတ်စလင်လူမျိုးဆိုတာမရှိဘူး။ တော်တော်ကိုလွဲနေတယ်။
“တန်ဖိုးနည်း” အိမ်ရာ အခြေခံ လူတန်းစားအတွက် ဈေးအလွန်ကြီးဟု ဆို
ရန်ကုန်ရဲ့ မွန်းကြပ်မှုက ဝေးလွင့်ရာ လမ်း ၅၀ ကဖေး
ကျပ် တသိန်းဝန်းကျင် ဆင်းမ်ကတ်များ သုံးနိုင်တော့မည်
ဈေးရောင်းပွဲ အစီအစဉ် အားနည်းချက် လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင် တောင်းပန်
ရွှေ့ပြောင်း လူထုတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး ပြဿနာ မလျော့ပါးသေး